Polisin’i Moskoa Voarara Miresaka Asa Ao Amin’ny Media Sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Marsa 2016 5:01 GMT
Vakio amin'ny teny русский, বাংলা, Español, Français, Ελληνικά, English
Sarin'ny polisy manamboninahitra rosiana, 2013, avy amin'i Vitaly V. Kuzmin ao amin'ny Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.
Voarara amin'ny fomba ofisialy ankehitriny ny firesahan'ny polisy manamboninahitra fampahafantarana resaka asa amin'ny tambajotra sosialy sy amin'ny fampihatra fampitan-kafatra. Manindry ny manampahefana amin'ny ampiharan-dalàna fa tokony mandeha amin'ny tambajotra voaaro avy amin'ny fampiasana fitaovana namboarina tao amin'ny sampan-draharaha ihany ny fifandraisana anatiny rehetra.
Nitatitra ny Rossiyskaya Gazeta, sehatra famoaham-baovao ofisialin'ny governemanta rosiana, fa tsy azo alefa amin'ny tambajotra sosialy tahaka ny VKontakte, Odnoklassniki, Facebook, Instagram na Twitter ny vaovao na fampahafantarana rehetra mifandraika amin'ny asa ao amin'ny fampiharan-dalànan'i Moskoa. Ankoatra izany, tafiditra ao anatin'ny lisitra tsy azon'ny polisy iresahana asa intsony ihany koa ny fampihatra fampitan-kafatra an'olona manokana tahaka ny Telegram, Viber, WhatsApp ary ny rindrambaiko ifampiresahana mifanatri-maso/ VoIP Skype.
Azon'ny manampahefana ao amin'ny polisy ihany anefa na izany aza ny fifampitana (zavatra hafa) amin'ireo sehatra sy fampihatra ireo, araka ny tatitra.
Amin'ny alalan'ny rafitra seramailaka ofisialin'ny Minisiteran'ny Atitany ihany, izay manana “ny dingana ambony indrindra” amin'ny fiarovana lahatahiry, araka ny lazain'ny komandin'ny polisin'ny renivohitra, no ifampitana resaka, adihevitra na tahirinkevitra na antonta-taratasy.
Nanamarika ny Rossiyskaya Gazeta fa tian'ny manampahefanan'ny polisy kokoa matetika ny teknolojian'ny fifandraisana ara-barotra satria ireny no mahomby, haingana ary mora ampiasaina kokoa. Ohatra amin'izany ny polisin'ny fanarahamaso ny lalana sy fifamoivoizana, izay mirona kokoa amin'ny fampiasana tambajotra sosialy sy ny fampiasan-kafatra ao anatiny fa tsy ny fampiasana ireo maridrefy an'onjampeo manokana na fifandraisana voaaro ifampitana ny lahatahiry (angona) ara-pifamoivoizana misy amin'ny fotoana ifampiresahana na trangan-javatra hafa.
Soritan'ny fitantanana ao amin'ny polisin'ny renivohitra fa tsy fikambanana na fiarahamonina sivily ny polisy, ka noho izany dia tokony ao anaty tambajotra mikatona ihany no ifampitam-baovao, dia izay tena voaaro sy mampilamin-tsaina. Fahadisoana ny fampitana tahirin-kevitra mifandraika amin'ny asa amin'ny fampitan-kafatra eo noho eo na tambajotra sosialy tsotra mahazatra ny sarambabe.
Tamin'ny Janoary 2016, nisy mpanao lalàna rosiana iray nanolo-kevitra fa tokony horaran'ny lalàna ny fampiasan'ny olompirenena rosiana rehetra tambajotra sosialy sy fampitan-kafatra eo noho eo any amin'ny toeram-piasana mba hiantohana kokoa ny fifampifehezana eo amin'ny asa, saingy tsy nanolotra ny fomba mazava entina mifehy izany fameperana izany izy, izay natao ho an'ny sampandraharaham-panjakana sy ny orinasa tsy miankina. Tsy nampiraika ny olona loatra ilay volavolan-dalàna, ary tsy fantatra amin'izao fotoana izao izay nanaovana azy.
Efa hatry ny fotoana elaela ihany izay ny manampahefanam-panjakana rosiana no nieritreritra fandrarana fampitan-kafatra eo noho eo isan-karazany. Tamin'ny Jona 2015 i Alexandr Zharov, lehiben'ny sampandraharaha rosiana mpanaramaso ny fampitam-baovao antsoina hoe Roscomnadzor no nanolo-kevitra [mg] fa tokony hanangana sy handrafitra tolotra fampitan-kafatra nasionaly ho azy i Rosia fa tsy tokony hiankina amin'ny fampihatra vahiny, ary ao anatin'ny paikadim-panoloana ireo afaran'ny firenena avy any ivelany no anaovana izany.
Tamin'ny Novambra 2015, niangavy [mg] ny sampam-pitsikilovana rosiana (FSB) ny mpanao lalàna rosiana Alexandr Ageyev ny hiheverany ny hanakanana ny Telegram fampihatra fampitan-kafatra eo noho eo satria “nampiasain'ny mpampihorohoron'ny Fanjakana Islamika (IS) fatratra io hampielezana votoaty eksitiremista” ary “tsy niraharaha ny fitarainan'ny mpiserasera momba izany karazam-botoaty izany” ry zareo. Ho setrin'izany dia niteny ho fiarovana ny Telegram ny Minisitry ny Fifandraisana Rosiana Nikolai Nikiforov ka nilaza fa tsy tokony hanakana ny fampihatra ny manampahefana, fa tokony “hamantatra sy hitory eny amin'ny fitsarana ireo rehetra mirotsaka ao anatin'izany asa tsy ara-dalàna izany.”
17 ora izayBelarosia